Deg Deg: Madaxweynaha Turkiga oo iclaamiyay in xaalad deg deg ah dalka lagu soo rogay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDeg Deg: Madaxweynaha Turkiga oo iclaamiyay in xaalad deg deg ah dalka lagu soo rogay
July 20, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan.
Ankara-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Reccep Tayip Erdogan ayaa iclaamiyay in dalka lagu soo rogay ‘xaalad deg deg ah’ muddo saddex bilood ah kadib inqilaabkii fashilmay.
Khudbad taleefishinka laga sii daayay maanta oo Arbaco ah ayaa Erdogan ku sheegay in go’aanka ay qaateen kadib kulan ay sameeyeen gudiga amaanka ee qaranka.
“Waa loo loo baahanyahay xaalad deg deg ah si dhaqso loogu ciribtiro dhamaan asaaska ururka argagixisada ah oo ku lug lahaa isku-dayga afgembiga” ayuu Erdogan ka yiri xarunta madaxtooyada ee Ankara.
Dowlada Turkiga ayaa ku eedaysay kooxda fadhigooda yahay Maraykanka ee uu hoggaamiyo wadadka Fethullah Gulen in ay ka dambayso afgembiga.